Indlela yokwenza imali kwi-Airbnb
Ku-Airbnb wonwabela inkqubo yokubhatala engasokolisiyo, iimali ezimele zibhatalwe eziphantsi, nokuba nenkululeko yokubeka amaxabiso.
Bona imali onokuyifumana
Indlu yonkeIgumbi lakho lokulalaIgumbi elisetyenziswa ngabantu abangaphezu komnye
undwendwe oluyi-1iindwendwe eziyi-2iindwendwe eziyi-3iindwendwe eziyi-4iindwendwe eziyi-5iindwendwe eziyi-6iindwendwe eziyi-7iindwendwe eziyi-8iindwendwe eziyi-9iindwendwe eziyi-10iindwendwe eziyi-11iindwendwe eziyi-12iindwendwe eziyi-13iindwendwe eziyi-14iindwendwe eziyi-15iindwendwe eziyi-16
Indlela esiyiqikelela ngayo ingeniso yakho
Kuqikelelwa ukuba ungafumana le mali xa kunokubhukishwa iintsuku eziyi-15 nyanga nganye ngamaxabiso aqikelelweyo osuku. Amaxabiso aqikelelwayo emihla ngemihla axhomekeke kumyinge wamaxabiso ezindlu ezikwindawo efanayo, uhlobo lwendlu kunye nokuba kuhlala iindwendwe ezingaphi. Imali onokuyenza isenokwahluka ngokwamaxabiso akho, uhlobo lwendlu yakho nendawo ekuyo, ukuba baye baba bangaphi abantu abaye bahlala, ixesha lonyaka, ifunwa kangakanani, imithetho yasekuhlaleni nezinye izinto.
Iintlawulo ezilula, ezingenabugocigoci
Bhatalwa ngendlela ofuna ngayo—ngePaypal, ngediphozithi ngqo, okanye ngezinye iindlela, kuxhomekeka kwindawo okuyo.
Faka indawo yakho simahla
Ungabhengeza ikhaya lakho kwizigidi zabahambi ngaphandle kokuzibophelela—kungekho zimali zokubhalisa okanye ezokuba lilungu ezitsalwayo.
Fumana isicelo sokubhukisha
I-Airbnb ihlawulisa undwendwe ngalunye ngaphambi kokufika ukuze iqinisekise ukuba uhlala ubhatalwa ngexesha xa usamkela iindwendwe. Soze kuphinde kudingeke uphathe imali ngqo.
Fumana umvuzo emva kokungena
I-Airbnb idla ngokukhupha imali yakho kwiiyure eziyi-24 emva kwexesha lokufika kondwendwe ukuze iqinisekise ukuba alubi namagingxi-gingxi ekufikeni kwalo.
Siyakwazi ukubekela ecaleni okuncinane ukuze songele imfundo yabantwana bethu bobabini kunye nokuthatha umhlala phantsi kwethu.
Ixabiso elihle, usuku ngalunye
Amacebiso anokuthenjwa ngokubeka amaxabiso
Kusoloko kuxhomekeke kuwe ukuba ubiza malini. Ukuba ufuna uncedo, sinezixhobo ezithelekisa amaxabiso akho nezinga lokufunwa kwendawo yakho, nto leyo eqinisekisa ukuba uhlala unexabiso elihle ntsuku zonke.
Imali eyongezelelweyo yeenkonzo
Unokucela imali engakumbi kwangaphambili xa kufike iindwendwe ezingakumbi okanye xa kufuneka izinto zokucoca indlu. Kwaye ukuba ufuna ukwenza nezinye iinkonzo, ezinjengokuqeshisa ngezixhobo okanye ukhenketho, iindwendwe zingakubhatala ngokusebenzisa i-app emva kokuba zibhukishile.
Ihambelana nezinto ozifunayo
Ungacwangcisa amaxabiso aqhelekileyo ngamaxesha athile onyaka, ngeempelaveki, nangezinye iintsuku ofuna ngazo ukulawula amaxabiso owabizayo. Kwakhona unokuba nezaphulelo zeveki nezenyanga zabantu abajonge ukuhlala ithutyana.
Ukubhalisa ku-Airbnb nokufaka indlu yakho akubhatalelwa. Wakuba ubhukishiwe, sitsala imali yeenkonzo zakwa-Airbnb yababuki zindwendwe, idla ngokuba yi-3%, ukwenzela iindleko zeshishini.
Ndazi njani ukuba ndiza kubhatalwa malini?
Imali oza kuyibhatalwa lixabiso lakho losuku, kutsalwe imali ebhatalwa ngababuki zindwendwe edla kokuba yi-3%. Iindwendwe zibhatala nemali yokusebenzisa u-Airbnb ngaphezu kweendleko zokuhlala kwindlu yakho, yiloo nto iyonke imali ebhatalwa zindwendwe ininzi kunemali oyibhatalwayo. Nazi ezinye izinto ezinokuchaphazela ukubhatalwa kwakho: Kungenzeka ukuba isaphulelo sakho seveki okanye isaphulelo senyanga sifakiwe kubhukisho Amaxabiso empela veki okanye amaxabiso ngosuku kungenzeka ukuba afakiwe kubhukisho Xa kufanelekile, ivethi inokongezwa ngentla kwemali ebhatalelwa ukusebenza u-Airbnb
Ndingalindela ukubhatalwa nini?
I-Airbnb ibhatala kwiiyure eziyi-24 emva kokubhalisela ukufika kweendwendwe zakho. Ixesha engena ngalo imali kwiakhawunti yakho ixhomekeka kwindlela okhethe ukubhatalwa ngayo. Ukuba undwendwe lwakho luza kuhlala iintsuku eziyi-28 okanye ngaphezulu, i-Airbnb idla ngokubhatala inyanga yokuqala kwiiyure eziyi-24 emva kokuba kubekwe ixesha eliza kufika ngalo undwendwe. Ezinye iimali ezibhatalwayo zolu bhukisho zikhutshwa qho ngenyanga. Ukuba usemtsha ekubukeni iindwendwe, imali oyibhatelweyo sisenokuyibamba kangangeentsuku eziyi-30 emva kokuba ubhukisho lwakho lokuqala luqinisekisiwe. Ukuba xa ibhukishwa okokuqala indawo yakho ibhukishelwe iintsuku eziyi-30 ezizayo, imali yakho iza kukhutshwa kwiiyure eziyi-24 emva kwexesha ekucwangciswe ukuba luza kungena ngalo undwendwe lwakho. Oku kuza kusebenza nakweyiphi na imali elungiselelwe ukuba ikhululelwe kwelo xesha leentsuku eziyi-30.
Ixabiso olibekayo kwindlu yakho lixhomekeke kuwe. Ukuze ukwazi ukukhetha, unokukhangela iindawo ezifana neyakho kwisixeko okanye indawo okuyo ukuze ubone ukuba amaxabiso athini
Imali eyongezelelekileyo Imali yokucoca: Unokufaka imali yokucoca kwimali yosuku ngalunye okanye uyongeze kwiisetingi zamaxabiso. • Enye imali ebhatalwayo: Ukuze ubhatalise imali engakumbi kule yosuku (njengemali yokungena emva kwexesha okanye eyesilwanyana sasekhaya), kufuneka uqale uzichazele iindwendwe ngaphambi kokuba zibhukishe ukuba kusenokufuneka le mali yongezelelekileyo uze emva koko usebenzise iZiko Lezemali lethu ukuze ucele ukubhatalwa le mali ngokukhuselekileyo.
Kuza kufuneka ubuze kurhulumente wasekuhlaleni ukuba iindwendwe umele uzibhatalise irhafu na okanye hayi. Ukuba ufumanisa ukuba kufuneka uzibhatalise irhafu, usenokuyifaka kwiSaphulelo Esikhethekileyo xa iindwendwe zibhukisha okanye uzicele ziyibhatale ngokwazo. Kwimeko nganye, kubalulekile ukuba ngaphambi kokuba iindwendwe zibhukishe, zaziswe ukuba ingakanani imali yerhafu ekuza kufuneka ziyibhatale. Ukuba ukhetha ukungayifaki irhafu kwixabiso lendlu yakho, umele uyibize kwiindwendwe kuphela xa zifika. Asikwazi kunceda okanye ukuqinisekisa ukuqokelelwa kwayo. Kwezinye iindawo, ababuki zindwendwe be-Airbnb banokukwazi ukuqokelela nokuthumela irhafu yokuhlala. Ababuki zindwendwe abamele baqokelele iirhafu zokuhlala ngokwahlukeneyo kwezo ndawo. Kwakhona, kwezinye iindawo, ixabiso elongeziweyo lerhafu (Ivethi) linokusebenza. [Funda ngevethi] (https://www.airbnb.com/help/article/436/what-is-vat-and-how-does-it-apply-to-me)